Silig Nikel Nadiif ah
Nikkel ganacsi ahaan saafi ah
Qaacidooyinka Kiimikada Ni Mawduucyada Daboolay Dabeecadaha Resistance Resistance ee Dhismaha Nickel Ganacsi ahaan Saafi ah oo Nadiif ah Nikkel Ganacsi ahaan saafi ah ama nikkel daawaha hoose wuxuu helaa arjigiisa ugu weyn ee ka shaqaynta kiimikada iyo elektaroonigga. Resistance Corrosion Sababtoo ah nikkel saafi ah ...
Fahamka Daawaha Aluminiumka
Iyada oo kororka aluminium -ka ee ku jira warshadaha been abuurka alxanka, iyo aqbalitaankiisa oo ah beddel aad u fiican birta dalabyo badan, waxaa jira shuruudo sii kordhaya oo loogu talagalay kuwa ku hawlan horumarinta mashaariicda aluminiumka si ay aad ugu bartaan kooxdan agabka ah. Si buuxda ...
Aluminium: Tilmaamaha, Guryaha, Kala -saarista iyo Fasallada
Aluminiumku waa biraha ugu badan adduunka waana walxaha saddexaad ee ugu badan oo ka kooban 8% qolofka dhulka. Fududeynta aluminiumka ayaa ka dhigaysa birta ugu badan ee la isticmaalo birta ka dib. Soosaarka Aluminium Aluminium waxaa laga soo qaatay bauxite macdanta. Bauxite waxaa loo rogaa alumin ...
Faa'iidada daawaha FeCrAl iyo khasaaraha
Daawaha FeCrAl wuxuu aad ugu badan yahay goobta kululaynta korontada. Sababtoo ah waxay leedahay faa'iidooyin badan, dabcan sidoo kale waxay leedahay khasaare, ee ha la barto. Faa'iidooyinka: 1, Heerkulka isticmaalka jawiga ayaa sarreeya. Heerkulka adeegga ugu badan ee daawaha HRE ee daawaha electrothermal bir-chromium-aluminium rea ...
Wararka Tankii ： Waa maxay resistor?
Resistor -ku waa qayb koronto oo dadban si loo abuuro iska caabin socodka socodka korontada. In ku dhow dhammaan shabakadaha korantada iyo wareegyada elektiroonigga ah waa laga heli karaa. Iska caabbinta waxaa lagu cabiraa ohms. Ohm waa iska caabbinta dhacda marka hadda hal ampere uu dhex maro ...
Sidee bay tuubooyinka shucaaca ahi u dheeraan karaan
Dhab ahaantii, alaab kasta oo kululaynta korontadu waxay leedahay nolosheeda adeegga. Alaabooyin kuleyliyaha korontada ku yar ayaa gaari kara in ka badan 10 sano. Si kastaba ha ahaatee, haddii tuubada dhaldhalaalka si sax ah loo isticmaalo oo loo dayactiro, tuubada iftiimaya ayaa ka cimri dheer kuwa caadiga ah. Xiao Zhou ha kuu soo bandhigto. , Sida loo sameeyo radian ...
Qaybaha kululaynta, Bayonet kululeeyaha, Bayonet Element Element, Wire Resistance, Fur gariiradda kululeeyaha, Nickel Wire,